Global Voices teny Malagasy » Mahafaty olona ny firotsahan’ny polisy an-tsehatra ao Ginea, mifikitra amin’ny fitondrana i Alpha Condé · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Oktobra 2019 5:17 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Mainty, Ginea, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Pikantsarin'efijerin'ny France 24 milaza ny vaovaon’ ny toe-draharaha any Ginea.
Nipoaka tao Ginea tamin'ny 14 oktobra ny herisetran'ny polisy, izay niteraka fahafatesan'olona maro  sy fisamborana tsy voaisa, noho ny fihetsiketseham-panoherana ny tetikasan'ny filoha Alpha Condé hanova ny lalampanorenena mba ahafahana mirotsaka ho amin'ny fehim-potoana fahatelo.
Lasa kianja ifanandrinan'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana ny araben'i Conakry, renivohitra, sy ireo tanandehibe ao an-kibon'ny firenena.
Etsy ankilany, nahazo tombondahiny manokana ny polisy ho afa-mitifitra avy hatrany araka ny voatondron'ny lalàna. Nahafatesana olona enina , ary zandary ny iray amin'izany, ireny fihetsiketsehana ireny sy maratra maro dia maro.
Vakio ihany koa: Mahazo alalana hitifitra raha vao mahita ny mpitandro ny filaminana 
Etsy andaniny, toherin'ny mpanao fihetsiketsehana ny fanovana ny lalampanorenana izay heverin-dry zareo ho paipaikan'ny filoha ikendreny ara-dalàna ahafahany miditra fehim-potoana fahatelo. Feran'ny lalàna ankehitriny ho roa misesy tokoa manko ny fehim-potoana iasan'ny filoha. 81 taona ny filoha Condé izay tokony hamarana ny fehim-potoana fiasany  amin'ny oktobra 2020.
Tena marefo tokoa ny mpanao fihetsiketsehana satria zary manitsakitsaka ny lalàna ny ataon-dry zareo, hoy ny fampahatsiahivan'ny  fikambanana iraisampirenena ho fiarovana ny zon'olombelona, Human Right Watch:
Efa mihoatra ny herintaona izao ny governemantan'i Ginea no nandrara ny fihetsiketsehana an-dalambe amin'ny fanononana ny filaminam-pirenena. Farafahakeliny fihetsiketsehana 20 no efa norarànan'ny manampahefana isaky ny any an-toerana. Mampiasa etona mandatsa-dranomaso amin'ireo olona mihaika izany fandraràna izany ny mpitandro ny filaminana, ary nisambotra mpanao fihetsiketsehana am-polony.
Eo amin'ny toe-draharaha politika, mifanohitra be ihany ny fitenin'ny governemanta: tamin'ny 13 oktobra ny filoha Condé niantso fifampiresahana, araka ny fampahatsiahivan'ny  habaka africaguinee.com:
Nanantitra indray ny antsony hisian'ny fifampiresahana tompon'andraikitra sy ny fiara-midinika maharitra indray i Alpha Condé mba handravonana ny tsy fitovian-kevitra sy hihoarana ireo fanamby manoloana ny firenena.
Mandritra izany fotoana izany ny mpanolotsaina ao amin'ny Prezidansa Ahmed Tidiane Traoré no nanambara tamin'ny 12 oktobra araka ny habaka  gineana guineenews.org, izany hoe roa andro alohan'ny fihetsiketsehana, amin'ny mpitolon'ny RPG Arc-en-ciel [Antoko eo amin'ny fitondrana] avy ao amin'ny fokontanin'ny seranam-piaramanidin'i Conakry:
Manasa ny tanora izahay hanao andrimaso eny anivon'ny fokontany. Nanangona [kodiarana efa niasa] ry zareo, manasa ny tanora ao amin'ny antoko izahay hamoaka ireny kodiarana ireny. Sakano ireo. Avoahy ireo kodiarana nafenina ireo, aza manafika na iza na izany, aza manimba na inona na inona, miarova tena fotsiny. Ho hita daholo ny mpanao ratsy ary haseho vahoaka
Vao maika nampitombo ny fahatezeran'ny mpanohitra sy ny firaisamonim-pirenena izany lela roa ataon'ny ao an-tampon'ny fitondrana izany, hany ka araka  ny habaka globalguinee.info:
Tamin'ity 14 oktobra 2019 ity, izay tsy isalasalana fa alatsinainy matroka mba tsy ilazana hoe mainty, nivoaka marobe ho eny andalambe ny vahoaka gineana ho fanoherana ny tetikasam-panovana lalampanorenana.
Nahitana fifandonana tany amin'ny fokontany maro tao amin'ny renivohitra gineana. Saika nihitsoka tanteraka ny raharaha tany amin'ny foibem-panjakana tao Kaloum. Voaroba ihany koa ny Points d’appui (PA) maro an'ny vondrona vonjy taitra an'ny polisy. Nisy nihaino maro ihany koa ny antso tany amin'ny faritra tao Ginea antenantenany sy Ginie ambany. Tsy dia nisy nihaino loatra kosa ny antso tany an'ala sy tany Ginea Ambony. Fa nihitsoka ny tanandehibe na dia izany aza.
Nanoratra  toy izao ny bilaogera maliana Adam Thiam raha naneho hevitra tao amin'ny benbere.org, sehatra maliana “ihaonan'ny tanora”:
Manomboka mihenjana ny toe-draharaha ao Ginea, amin'ireo tabataba mirehidrehitra, tahaka ny lasa mahazatra ny fahafatesan'ny mpanao fihetsiketsehana rotiky ny bala, ra mandriaka eny amin'ny rarivato voabahana sy ny fihaonan-dalana irehetan'ny kodiarana sy ny etona mandatsa-dranomaso.
Melohin'ny mpiserasera ao Ginea sy any an-kafa ao Afrika any amin'ny tambajotra sosialy ny herisetra.
Mampitandrina ny filoha gineana ny mpisera Twitter Concerned Citizen®🇸🇳 (@raia_husika):
Tahaka an'i Blaise Compaoré, mizotra mankany amin'ny tevana ihany koa i Alpha Condé. Handre ny hiakam-pahatezeran'ny mpiray tanindrazana aminy ve izy? Hanefy antsika ny ho avy akaiky dia akaiky. Mandra-piandry izany, manomboka mihilangilana ny sambo.
Naneho setriny avy amin'ireto teny ireto ny mpanora-gazety gineana Bhoye Barry (@BhoyeBarry91) tamin'ny 15 oktobra:
Hamdallaye pharmacie (#Conakry ) olompirenena tairin'ny Mpitandro ny filaminana androany maraina.
Araka ny nolazain'ny olom-pirenena tao amin'ny faritra, manomboka mamaky varavarana sy mandroba izay ao an-trano ny mpitandro ny filaminana.
Naneho ny loniloniny i S. Nkola Matamba(@Simeon_5) mpanoratra sady mpikatroky ny zon'olombelona avy ao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo:
Fahiny mpanohitra, ankehitriny levon'ny faniriana hanova ny lalàna mba ahafahana miditra fehim-potoana fahatelo, mba hahazoana mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana hatramin'ny farany angamba, Alpha Condé no maneho ireo faritra matroka amin'i Afrika tsy mitsahatra ny misintona antsika hidina! Mahereza ny vahoakan'i Ginea!
Ho an'ilay senegaly Cheikh Fall™ @cypher007 ny fandavana hiala amin'ny fahefana no olana:
Tena mampalahelo. Andro voalohany amin'ny fihetsiketsehana anoherana ny fehim-potoana fahatelo ho an'i Condé dia indreo ny vokatra amin'ny isan'ny niharam-boina ahitana maty maro. Ilay fahadalàn'ny politisiana te-hitazona ny toeran'ny filoham-panjakana mandra-maty.
Manamarika ihany koa ny sasany amin'ireo fikasana hanodikodina ny saim-bahoaka, mahita izany ilay mpikatroka gineana Macky Darsalam :
Ginea: Mba hampalemy ny fihetsiketseham-panoherana ataon'ny olom-pirenena ho fanoherana ny fikitikitihana ny lalampanorenena androany alatsinainy, mizara vary amin'ny gony eto an-drenivohitra ny governemanta.
Miraviravy tanana ny gineana ao amin'ny fanoherana manoloana ireo fanafihana ireo: nampiato ny fandraisany anjara  adihevitra parlemantera ireo depioten'ny antoko UFDG, UFR, UDG, UPG izay manohitra an'i Condé, sy ireo mpikambana ao amin'ny vondrona parlemanteras ‘’Libéral Démocrate et Alliance Républicaine’’ hatramin'ny 11 oktobra 2019 lasa teo. Miampy izany, mihamahery vaika ny herisetra mihatra amin'ireo antoko ireo, araka ny nomarihan'ny habaka mediaguinee.org:
… Ao amin'ny foiben-toeran'ny UFR an'i Sidya Touré, gidragidra teo amin'ny mpikambana sasantsasany ao amin'ny fanoherana sy ireo mpitolon'ny fironana izay nandray fepetra ny omalin'io mba hanidiana izay fihetsiketsehana rehetra tsy nahazoana alalana ao amin'ny toerana fahazoan'ny antoko ao amin'ny fitondrana vato betsaka. Gidragidra izay niafata amin'ny fandrobana ny foiben-toeran'ny UFR sy ny fisamborana olona enina izay tsy fantatry ny sarambabem-bahoaka hoe iza ireo ary avy amin'ny antoko inona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/18/144060/
 milaza ny vaovaon’: https://www.dailymotion.com/video/x7mpo90
 fahafatesan'olona maro: https://www.seneweb.com/news/Afrique/bilan-des-manifestations-en-guinee-six-morts-dont-5-civils-et-un-policier_n_89757.html
 Mahazo alalana hitifitra raha vao mahita ny mpitandro ny filaminana: https://mg.globalvoices.org/2019/08/06/142465/
 tokony hamarana ny fehim-potoana fiasany: https://www.dw.com/fr/plusieurs-opposants-arr%C3%AAt%C3%A9s-en-guin%C3%A9e/a-50809360
 araka ny habaka: https://www.guineenews.org/manifs-du-fndc-voici-lappel-du-rpg-a-ses-militants/
 ampiato ny fandraisany anjara: https://www.africaguinee.com/articles/2019/10/11/guinee-les-deputes-de-l-opposition-quittent-l-assemblee-nationale-0